Ukukhuselwa kweSixhobo soMatshini we-SPD kunye noMthengisi
Umzi mveliso wamandla
Icandelo lezemichiza nelamayeza
Izibane ze-LED ze-SPDs
Sisixhobo soKhuselo lweSurge Umenzi woqobo ngohlobo lwayo kwaye ikwabonelela OEM kwaye ODM iinkonzo.
Sigcina ngobuchule kunye nokuzinikezela- ukuze kuzuze abathengi bethu, amaqabane kunye nabasebenzi.
Isixhobo sokukhusela (SPD) Khusela iiasethi zakho
Ukuba unomdla wokuba yiarhente kwintengiso yakho, siya kuba sisipele sakho esomeleleyo.
Sinikezela ngenkxaso yobuchwephesha obuphezulu kwiqela leetekhnoloji. Uncedo luqinisekisiwe ngomnxeba, nge-imeyile okanye ngenkomfa yeWhatsapp kwaye ukongeza, abasebenzi bethu bezobuchwephesha benza uhlolo kwizityalo kwihlabathi liphela ezifuna ukukhuselwa ngokubonelela ikakhulu ngobungakanani benkqubo ye-SPD kunye nolona fakelo lufanelekileyo kunye nemiyalelo yendibano. Iqela lobunjineli licwangcisa iiseshoni zoqeqesho ezinikezelwe kubo bobabini abathengisi bemikhosi yokuthengisa kwaye ngokuthe ngqo kubathengi.
Abathengi banokuthembela kwinkxaso ethembekileyo yobuchwephesha, ukuchaneka kunye nembeko engqongqo kwiimfuno zabo. Inkampani yethu yenza ubungakanani kunye noyilo lweenkqubo, ngokusebenzisana nabayili kunye neenjineli, ngakumbi ezintsonkothileyo, kwaye zibonelela ngenkxaso yezobuchwephesha kunye neyorhwebo.
I-LSP yinkampani ejolise kubuchwephesha bokuzivelela kwezinto, ihlala ifuna ukusebenza ngokukuko nangaphezu kwayo yonke imigangatho.
Iqela lethu liqulunqwe ngabasebenzi abaqeqeshiweyo nabanamava, sizama ukuhlala sinyathelo elinye phambili kwinto entsha.
Iza kuyikhathalela njani i-LSP nge-odolo yakho
1.Fumana umbono wokuqala woyilo okanye isampulu evela kuwe
A. Usithumela imibono yoyilo lwakho okanye umzobo weCAD, siya kukwenzela imifanekiso yasimahla yeCDR.
B. Uthenga imifanekiso yeCDR evela kwinkampani yoyilo kwaye uyithumele kuthi, siyila isampulu ye-SPD ngokwemifanekiso yakho yeCDR.
C. Sithumele isampuli yakho yemveliso, senza uyilo olufanayo njengesampulu yakho yeeodolo ze-OEM.
D. Khetha kuluhlu lwethu esele sikho, sinezinto ezininzi zoyilo lwe-SPD-ukuba uyayithanda uyilo lwethu, khetha nje kwigalari yethu okanye unxibelelane nathi ukuze ufumane ezinye izimvo zoyilo.
Uvavanyo lwe-2.100% kwiCandelo ngalinye emva kweNdibano
Siza kuvavanya ukusebenza kwe-SPD nganye ukuqinisekisa ukuba iyahlangabezana neemfuno zakho.
Isebe lendibano 3.Professional
Ukudibanisa onke amacandelo kunye nezixhobo kwiimveliso ezigqityiweyo kwenziwa ngabasebenzi abaqeqeshiweyo kwaye iisuphavayiza ezifanelekileyo zinoxanduva lokufumana imveliso yokugqibela.
I-4 yeProfessional kwi-QC yeQela
Ngokweemfuno zemveliso, zonke iimveliso ezibonakalayo kunye nokusebenza kufuneka kudlule ukuhlolwa kwe-100% kwi-Intanethi yi-QC efanelekileyo ngexesha lenkqubo yendibano.
5. Kwanelisa Zonke iimfuno zakho zokuPakisha
Ukulandela ukuhlolwa kwemveliso, siya kupakisha iimpahla ngokweemfuno zakho zonke. Umbala webhokisi, blister kabini okanye pallet. Siza kukuthumela kwakhona imifanekiso eneenkcukacha zenkqubo nganye yokupakisha.
6.Khuseleko kunye nokuHanjiswa kweXesha
Ulungiselelo ngalunye lokuthunyelwa lwenziwa phantsi kweliso elibukhali. Siza kubonelela ngemifanekiso yenyathelo ngalinye lenkqubo kubandakanya neefoto zesitya esikhuselekileyo. Ngenxa yezikhokelo ezingqongqo kunye nolawulo olusondeleyo ngalo lonke ixesha siyakwazi ukuphelisa iimpazamo ekulayisheni iimpahla zakho.
7.Uya kufumana yonke imifanekiso yokulayisha kunye namaxwebhu
Siza kukubonelela ngayo yonke imifanekiso yokulayisha, kwaye iqela lethu lezinto ezinamava liya kukuthumela onke amaxwebhu emva kokuba ukugcwaliswa kugqityiwe.
Sikhethile I-LSP ngenxa yokuba bathembeke kakhulu ukusukela kusuku lokuqala. Banabasebenzi abaqeqeshiweyo nabaqeqeshwe ngokupheleleyo abasinceda ukuba silandele iiodolo zethu kwaye sihlala sonwabile ukubonelela ngeefoto zemveliso nganye okanye inkqubo yemveliso- esivumela ukuba silandele inqanaba ngalinye lenkqubo yoku-odola. Zonke iimveliso zisiwe ngaphakathi kwexesha ekuvunyelwene ngalo kubalulekile kwishishini lethu.
UShelly Siss, Fransi
Ndifumana ukujongana nayo I-LSP eyonelisayo kakhulu, ngenkqubo yokuyalela ngqo phambili kunye netekhnoloji efanelekileyo esetyenziselwa ukwenza iimveliso. Ngokuqinisekileyo ziingcali kwicandelo labo kwaye liqabane elomeleleyo kwishishini lethu.
U-Anna Ventura, SPEYIN
I-LSP ibisenza imveliso yethu ye-SPD yokuKhuselwa kwesiXhobo ukusukela ngo-2012. Yonke imveliso ibisemgangathweni obalaseleyo kwaye ifumene ingxelo eyakhayo evela kubathengi bethu. Enkosi!
U-Erice Herman, TSHILE
Ukuba unemibuzo, inkxaso yethu yokuphendula ngokukhawuleza kwabathengi ilapha.
Iingcingo zoMqondiso eziKhuselekileyo zoKhuselo lwesiXhobo
Izixhobo zokukhusela iifowuni zokukhusela isixhobo seDehn - Iinkqubo ze-IT ze-DIN Rail inyuke nge-SPD [...]
Ukucoca iipali ezimbini zohlobo lwe-3 T3 ekubanjweni kwe-DR M 2P IL = 25A
Ukucoca iipali ezimbini zohlobo lwe-3 T3 ekubanjweni kwe-DR M 2P IL = 25A DEH [...]
Ukukhuselwa kokukhuselwa kwendawo yeseli ye5G (isikhululo sesiseko seselfowuni)
Ukukhuselwa kokukhuselwa kwendawo yeseli ye5G (isikhululo sesiseko seselfowuni) Ukukhusela unikezelo lwamandla Thintela [...]
IWenzhou Arrester Electric Co., Ltd.
Yongeza: 5th FL, No. 666 Yaming Road, Xiangyang Industry Park, Liushi, Yueqing 325604 Zhejiang, PR China
Ifowuni ephathekayo: + 86-18905776650 (WhatsApp, Wechat)
I-imeyile: ukuthengisa [@] lsp-international.com
© Copyright 2010-2022 Wenzhou Arrester Electric Co., Ltd. Onke amalungelo agciniwe. | umthetho wabucala | Migaqo nemiqathango |